07 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ72013
Marmaray စီမံကိန်း Gebze တံတားဆိပ်ခံတံတားအကူးအပြောင်း 1 ဒဏ်ရာရအလုပ်သမားများအတွက်ပြိုကျ
Marmaray စီမံကိန်း, 1 လူတွေဒဏ်ရာရရှိတံတားဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအကူးအပြောင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းကျွံ၏ Kocaeli ရဲ့ Gebze ခရိုင်။ မတော်တဆမှုစားဖိုမှူးအဆောက်အဦး shift မတိုင်မီစက္ကန့်အနည်းငယ်များအတွက်သတိပေးအကြောင်းကြားစာ, ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ 12 လုပ်သားများပြိုကျလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Marmaray စီမံကိန်း Gebze ခြေလျင် [ပို ... ]
Ahmet ထင်ပေါ်ကျော်ကြား Yilmaz: ဘူတာရုံလေ့ကျင့်ဘဲ, တပြည်လုံးကို scaring လမ်းကိုသွားပါဦးမည်
Ahmet ထင်ပေါ်ကျော်ကြား Yilmaz: ဘူတာရုံလေ့ကျင့်ဘဲ, တပြည်လုံးကို scaring လမ်းကိုသွားပါလိမ့်မယ် Gursu high-speed ကိုမီးရထားဘူတာရုံများတွင်ဆွေးနွေးမှုပေမယ့်လိပ်ခေါင်းဘူတာရုံ၏တရားဝင်အမည်အားအဖြစ် ... တတ်၏။ သို့သော်နာမကိုအမှီရှိနေသော်လည်းပုံရွာ၌အရပျဗိုင်းလိပ်တံမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားအရာရှိတဦး၏ ... ပြီးသားပြောပြီ name ကို [ပို ... ]
အဆိုပါရထားလမ်းအငြိမ်းစား Ray ရဲ့အစွန်းပေါ်မှာအသေကောင်တွေ့ရှိရ
အဆိုပါရထားလမ်းအငြိမ်းစား Ray ရဲ့အစွန်းပေါ်မှာအသေကောင်တွေ့ရှိရ: Erzincan 82 TCDD နှစ်အရွယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် Necati Bircan ရထား၏အစွန်းတွင်တွေ့ခဲ့သည်ကနေအနားယူခဲ့သည်။ သူမ၏လက်မောင်းနှင့်မျက်နှာမှဒဏ်ရာနှင့်တကွ, အဘိဓါန် Eastern Express ကိုဝင်တိုက်သောဆိုင်ကယ် Bircan တူရကီ-Kars လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူပုလင်းစုဆောင်း [ပို ... ]
Rayhaber Archive သည်သတင်း (၁၅) သောင်း (အထူးသတင်း) အတည်ပြု
ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုချက်ချင်း, တူရကီနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရထားလမ်းစနစ်များ၏လယ်ပြင်တွင် လုပ်. , သတင်းလုပ်ဖို့မှန်ကန်သောလမ်းတစ်လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုစီမံကိန်းကိုအဖြစ်ကိုရိပ်မိခဲ့ပါတယ်နှင့်ရထားလမ်းစနစ်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအပေါ်အသိအမြင်ကိုဖန်တီးရန်ထူထောင်ခဲ့သည် RayHABER ကျွန်ုပ်တို့၏ site 15 တထောင်သတင်း [ပို ... ]
တူရကီတင်ပို့သူများညီလာခံ (TIM) ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်Bülent Aymen, ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုသူကဆိုသည်။ Bülent Aymen, ကမ္ဘာပေါ်မှာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စျေးအသက်သာဆုံး mode ကိုဖွစျကွောငျးသတိပေးခံခဲ့ရသည်တစ်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ တူရကီအတွက်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးသမ္မတနိုင်ငံ [ပို ... ]
RayHaber 07.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူလိမ့်မည် (မျက်နှာကြက်သံအလေးချိန်စနစ်များကိုကွန်ကရစ်အလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်) အခန်းကဏ္ house မှအချက်ပြပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် (ဂူndüzbeyထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာအတွင်း) အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။ (Pinbrazing အမျိုးအစားဂဟေနှင့်ရထားလမ်းတူးစက်) [ပို ... ]
SNCF စပိန် Comsa ရထားပို့ဆောင်ရေး, အ 25 ရာခိုင်နှုန်းဝေမျှမယ်လက်ခံမှသင်္ကေတပြသဘောတူညီချက်
29 ဧပြီ, ပြင်သစ်မီးရထား၏အော်ပရေတာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး, SNCF Geodis, စပိန်ကုမ္ပဏီ Comsa ရထားပို့ဆောင်ရေးရဲ့ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (CMT) ကအစုရှယ်ယာ 25% ဝယ်ဖို့သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Comsa သဘောတူညီချက် EMTA အားဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်။ CRT နှင့် SNCF Geodis, စပိန်အတွက်နေ့စဉျတိုးမြှင့် [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Tram ဝယ်ယူပါလိမ့်မယ် (Gaziantep မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး)
ဓါတ်ရထားပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ 28 အတိုင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် GAZIANTEP အမှတ် 4734 19 ပမာဏဓါတ်ရထားဧည့်ခံ၏မြူနီစီပယ်ဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းနံပါတ် [ပို ... ]
MI အမြင့်မြန်နှုန်း Samsun မှရထားအရာ?
MI အမြင့်မြန်နှုန်း Samsun မှရထားအရာ? CHP လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Haluk Koc, ပို့ဆောင်ရေး, သင်္ဘောများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim "Samsun အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းငါဖြစ်လိမ့်မည်, သို့မဟုတ်ဤစီမံကိန်းကိုစွန့်လွှတ်မှလွန်ခဲ့သလဲ" သူကမေးတယ်။ [ပို ... ]
ဂျော့ဘ်: အလုပ်သမားများEskişehir TULOMSAS ယ်ယူရန်ခဲ
Eskisehir TULOMSAS အလုပ်သမားယ်ယူရန်သခင်, 24 သန့်ရှင်းရေပိုက်သမား, 10 မော်တော်ကားဆေးသုတ်လုပ်သားရန်တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်း4မော်တော်ယာဉ်,2အရင်းအမြစ်, 24 ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာ, 68 အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာရှင်,2လျှပ်စစ်, 10 ဆိုလိုသည်မှာ extension ကိုပို့ဆောငျ, [ပို ... ]
အလောင်းတွေ၏လျှို့ဝှက်ချက် (ဗီဒီယို) Metrobus အတွက်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်
သတ်သေSefaköyအလောင်းတွေကျူးလွန်သူတစ်ဦး၏လျှို့ဝှက်ချက် Metrobus အတွက်ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြသည်, metrobus ပေါ်မှာလှဲ။ နံနက်ယံ၌ Zincirlikuyu Metrobus Metrobus ကားမောင်းသူဝန်ဆောင်မှုအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကျွန်မ Metrobus အပေါ်နေဆဲမုသာစကားကိုသဘောပေါက်ဘူတာရုံမှလာမယ့်ပါလိမ့်မည်။ Metrobus ကားမောင်းသူ status ကိုချက်ချင်း [ပို ... ]
ဘယ်လိုရထားလမ်းစနစ်၏လမ်းကြောင်းအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်စနစ်၏ကုန်ကျစရိတ်၏ Osmanbey ကျောင်းပရဝုဏ်၏အိပ်မက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ Sanliurfa ရထားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 450 သန်းကုန်ကျမည်ဟု TL ကဆိုသည်။ ဘယ်လိုဘဝက "ရထား" စီမံကိန်းမှာတည်ရှိပါတယ်တူရကီရဲ့အများဆုံးအကြွေးမြူနီစီပယ်၏Şanlıurfaမြူနီစီပယ် [ပို ... ]
ရထားအစ္စတန်ဘူလ် 1 လူမျိုး၏ Maltepe ခရိုင် Maltepe 21.30 အမိန့်မှာမနေ့ကညနပေိုငျးဖြစ်ပွားခဲ့သည်, သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်အပျက်အရကွယ်လွန်သွားနှိပ်ပါ။ လူကူးဇုန်မှအဝင်ဝ၏ရှေ့အနီး Pendik, Maltepe ဘူတာကနေပြန်လည်ထွက်မည့်ခရီးသည်ရထားလမျးညှနျခ Haydarpasa [ပို ... ]
07 / 05 / 2013 Levent Ozen 1
အဆိုပါလမ်းကြောင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းမှဖြတ်ကူးရန်ကြိုးစားစဉ်တူရကီရထားများပြားဟောငျးက Man ရဲ့ခြေထောက်နဲ့လူငယ်များသို့တူရကီရထားပေါ်တွင်လူဟောင်းရဲ့ခြေထောက်ကျိုးခဲ့နှိပ်ပါ။ Sincan မီးရထားဘူတာပဲစင်းငုံအတွက်မတော်တဆမှုညဉ့်နာရီကြာကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါပြုပြင် yht'n အလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ [ပို ... ]
TÜDEMSAŞအတွက်မြို့ပြစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဖိုရမ်မြို့ပြစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဖိုရမ် Sivas တှငျကငျြးပခဲ့ကွောငျးကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နောက်ဆုံးကြေညာချက်ထဲတွင်ရှေ့မှောက်သို့ရောက်ကြ၏။ ကြီးမားသောစီမံကိန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများအတွက်5Sivas ဖိုရမ်အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်TÜDEMSAŞအတွက်ရှေ့မှောက်သို့ရောက်ကြ၏။ တက် 2023 မှ4TÜDEMSAŞဖို့နှင့်အတူ Sivas အတွက်တက္ကသိုလ်များ၏နံပါတ်ခေတ်မီ [ပို ... ]
အဆိုပါလမ်းရထား Konya အပေါ်ထင်ဟပ်
Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်ဦးဆောင်မြူနီစီပယ်၏တဦးတည်းသောလမ်းရထားတူရကီအတွက် Konya ပေါ်တွင်ထင်ဟပ်လက်ရှိလမ်းရထား tramcars စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တွေနဲ့ဆက်လက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင်မှာရထားလမ်းကုမ္ပဏီ Skoda 60 tramcars ထံမှသိမ်းယူခံရဖို့ [ပို ... ]
07 / 05 / 2013 Levent Ozen 3
Düzceyမြန်ရထားယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားအသင်းနှင့် 350 ကပြင်ဆင်စီမံကိန်းများနှင့်အတူDüzceတူရကီ duzceli မြန်နှုန်းရထားကိုခေါ်အယူအဆဒီဇိုင်းလေ့လာမှုကနေသွားကြဖို့စတင်ခဲ့တူရကီနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အကြားတစ်နာရီအရှိန်ရထားလိုင်းကိုကီလိုမီတာ။ ဒီအဆင့်မှာGölyakaရဲ့Saçmalıpın [ပို ... ]
ဗိသုကာAydınထံမှ DE တုံ့ပွနျမှု Chambers သမ္မတ Osman လာသော 2016 သည့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ "အလီ Riza Akinci ရှင်းလင်းချက်ခုနှစ်တွင်ဗိသုကာတုံ့ပြန်မှုမြန်ရထား Fast Training Expo မျှော်လင့်ထား၏ Raiders ။ AKINCI နည်းပညာ Close ÇAĞIRAN Aydin ACCI မကြိုက်ဘူး [ပို ... ]
လျှပ်စီးအစာရှောင်ခြင်းမီးရထားလက်မှတ်ဝန်ကြီးများဝန်ကြီးများနှင့်နိုင်ငံသားများအကြားမှာရှိတဲ့ AK ပါတီKızılcahamamစခန်းကိုလည်းရောင်စုံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေ့ကြုံခံစားဖို့အခါသမယဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင်Kızılcahamam'dakiအတွက်နိုင်ငံသားများနှင့်အတူလိမ္မာဝေးသည့်နိုင်ငံရေး atmasfor မှသူ၏စာနာသဘောထားကိုလူသိများဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝန်ကြီး Binali Yildirim [ပို ... ]
အာဏာပိုင်အဲဒီမှာပိုက်ဆံရှိရထားအာဏာပိုင်များ, ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်, ရွက်လှေများမဝယ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည် .. ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်လေ့ကျင့်သို့မဟုတ်အာဏာပိုင်များသည်မဟုတ်လော ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍserbestleşip၏အသုံးပြုမှုကို၏အဖွင့်ပြီးနောက်တူရကီသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထား, ရထားအာဏာပိုင်များကိုဝယ်လိုသောမည်သူမဆို [ပို ... ]